သာကေတ ကအစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ? | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeသာကေတ ကအစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ?
သာကေတ ကအစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ?
သာကေတ ကအစ္စလာမ် စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ
April 29, 2017 ကျော်ဖုန်းကျော် ရေးသားသည်။
အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအား ပိတ်ရန် ပြင်ဆင်နေကြစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-တေဇလှိုင်
ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်မှ အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်း လေးကျောင်းအား အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်ကို အမည်ခံယူထားသောအဖွဲ့မှ ရဟန်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များက အကြပ်ကိုင်ပိတ်ခိုင်းမှု ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သို့သော် အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်မှာ သာကေတမြို့နယ်မှ နယ်ခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များ အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အများစုက ထင်မှတ်နေကြသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်သည် အများထင်မှတ်ထားသည်နှင့် ကွဲလွဲနေသည်ကို ဖြစ်စဉ်အား မဖြစ်မီမှစတင်ကာ ဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ အနီးအနားတွင် Frontier သတင်းထောက်နှင့် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်များက စောင့်ကြည့်နေခဲ့သဖြင့် မျက်မြင် လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအား အချိန်ကာလနှင့်တကွ ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မျိုးချစ်မြန်မာရဟန်းတော်များသမဂ္ဂ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဥာဏဓမ္မ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးသုစိတ္တ၊ မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်တို့ ဦးပါမောက္ခတို့နှင့် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူဟု ၎င်းကိုယ်ကို၎င်း သုံးစွဲသည့် ကိုဝင်းကိုကိုလတ်အပါအဝင် ကိုနိုင်ဝင်းထွန်း၊ ကိုသက်မျိုးဦးနှင့် ကိုနေဝင်းအောင်တို့အား ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် ကမာရွတ်မြို့နယ် အာဏာပိုင်များက တရားစွဲဆိုထားသည့်အမှု၏ ရုံးချိန်းရှိကြောင်း ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံး၏ ကြေညာသင်ပုန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမှုအား မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်သန္တာရှင်က ကြားနာစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအမှုသည် အမေရိကန်သံရုံးရှေ့တွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဆန္ဒပြခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကနဦးကက ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် ဒုမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ၎င်းတို့အား တရားစွဲဆိုထားရာမှ နောက်ထပ် ပုဒ်မတိုးစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပုဒ်မ ၁၉ အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရင်ဆိုင်နေသည်မှာ ကာလကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)အမှုနှင့်မူ ပထမဆုံး စတင်ကြားနာသည့်နေ့ဖြစ်သည်။
နံနက်ခင်း အချိန်မှစတင်၍ တရားရုံးတဝုိုက်တွင် လူများစတင်စုရုံး စုရုံးဖြစ်နေကြသည်။
မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်
ရဟန်းသံဃာအချို့နှင့် အများစုက အင်္ကျီလည်ကတုံးအဖြူနှင့် ပုဆိုးများ ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူကြီးလူငယ်များ တရားရုံးပတ်ဝန်းကျင်သို့ အများအပြား စုဝေးလာကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေ ၁၀၀ နီးပါးခန့်အထိရှိလာသည်။
မကြာမီတွင် အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဦးဝီရသူ ကားဖြင့် ရောက်ရှိလာသည်။ လူအများက စုရုံးကြိုဆိုကြသည်။ ဦးဝီရသူအား လူအုပ်ကြားတွင် တို့းဝှေ့ကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ကြိုးပမ်းသည့် 7day သတင်းစာမှ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုစိုင်းဇော်ဇော်သိုက်အား လူအုပ်က ဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ် တွန်းထိုးကြသည်။ စုရုံးစုရုံးဖြစ်သွားကာ သတင်းထောက်က လွတ်ရာသို့ ထွက်ခွာသွားရသည်။ ထို့နောက် ခပ်လှမ်းလှမ်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သွားထိုင်နေသောသူ့အား လူငယ်ခြောက်ဦးခန့်က ဆိုင်ထဲဝင်ကာ လိုက်လံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အခြေအနေ ဆက်လက်မတင်းမာတော့ဘဲ ပြီးစီးသွားသည်။
ဦးဝီရသူက ကမာရွတ်တရားရုံးနှင့် သုံးအိမ်ကျော်ခန့်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်။
မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်သန္တာရှင်က အမှုကို စတင်စစ်ဆေးသည်။ တရားခွင်သို့ ဆရာတော် ဦးပေါမောက္ခ မတက်ရောက်ဘဲ အမှုတွင်ပါဝင်သည့် ကျန်သံဃာများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထူးခြားသည်မှာ တရားသူကြီးသည် ပုံမှန်တရားသူကြီးများ ထိုင်လေ့ရှိသည့်စင်မြင့်ထက်တွင် မထိုင်ဘဲ ရှေ့နေများ မတ်ရပ်ရပ် အမှုလျှောက်လဲသည့်နေရာတွင် ဖိနပ်ပါချွတ်ကာ ရပ်လျက် အကျိုးအကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားသူကြီးက ၎င်းသည်နေပြည်တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ကျသဖြင့် ယနေ့လုပ်ငန်းတာဝန်များ လွှဲအပ်နေကြောင်း၊ အမှုအား နောက်တရားသူကြီးက ဆက်လက်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ အမှုသည် အာမခံပေးလို့မရသည့် အမှုဖြစ်သော်လည်း နောက်ထပ်ရုံးချိန်းသာ ထပ်ချိန်းလိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ညှိနှိုင်းပြောဆိုကာ လာမည့်မေ ၁၂ ရက်သို့ ချိန်းဆိုပေးလိုက်သည်။
ထိုအချိန်တွင် ဦးဥာဏဓမ္မနှင့် ဦးသုစိတ္တတို့အပါအဝင် တရားခွင်တွင် ၎င်းတို့နှင့် ယှဉ်တွဲထိုင်နေသော သံဃာများက ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) တပ်ခြင်းသည် ဖိနှိပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃာများအား တရားစွဲလျှင် သံဃနာယက ခွင့်ပြုချက်လိုကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ သံဃနာယက ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ တရားစွဲဆိုခြင်းအား လက်မခံသဖြင့် အမှုအား ရင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ ဖမ်းလျှင်လည်း ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃနာယက ခွင့်ပြုချက်မဲ့ တရားစွဲဆိုသည့်အမှုအား လက်ခံသည့် တရားသူကြီးသည်လည်း ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုကြောင်း တရားခွင်တွင် တရားသူကြီး ဒေါ်သန္တာရှင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားသူကြီးကမူ ဥပဒေအတိုင်းသာသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအပိုင်းမှာမူ ဆရာတော်တို့၏ သဘောထားပေါ်မူတည်ကြောင်း ၎င်းအနေနှင့် သဘောထားမှတ်ချက် မပေးကြောင်း ဖြေးညှင်းစွာ တုန့်ပြန်ပြောခဲ့သည်။
တရားခွင်တွင် လာရောက်သတင်းယူသည့် သတင်းထောက်များကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးရန် တရားခွင်မှအထွက်တွင် သံဃာတစ်ပါးက ပြောကြားခဲ့သည်။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန့်
တရားခွင်မှ ထွက်လာသည့် သံဃာများနှင့် လူများအား အပြင်မှစောင့်ဆိုင်းနေသည့် လူအုပ်က လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ ကြိုဆိုကြသည်။
ဦးဝီရသူကမူ တရားရုံးအနီးရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကျသည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။
မကြာမီတွင် အမျိုးသားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လက်ချိတ်ကာ ဦးဝီရသူပြန်လည်ထွက်ခွာရန် စီစဉ်ပေးကြသည်။ ဦးဝီရသူသည် နှာခေါင်းအုပ်အမည်းကိုစွပ်ပြီး ကားဆီသို့ ခပ်မှန်မှန်လှမ်းသွားကာ ကားနားအရောက်တွင် သတင်းထောက်များအား အနားတိုးလာရန်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် နှာခေါင်းအုပ်ကိုချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်အား တိတ်အနီနှင့် အနက်ဖြင့် ကြက်ခြေခပ် ပိတ်ထားသည်အား ထုတ်ဖော်ပြပြီး လက်မထောင်ကာ ကားထဲဝင်၍ ထွက်ခွာသွားသည်။ လူအုပ်ကထိုအချိန်တွင် “အမျိုးသားရေးဝါဒ အောင်ရမည်၊ အောင်ရမည်”ဟု အကြိမ်ကြိမ် အော်ဟစ်ကြသည်။
မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်
တရားရင်ဆိုင်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်များပြန်သွားပြီးနောက် တရားရုံးအနီး စုရုံးနေသော လူအုပ်အတွင်းမှ အချို့က သာကေတ အနော်မာရပ်ကွက်သို့ ချီတက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသံများ ကြားရသည်။ ထို့ကြောင့် Frontier သတင်းထောက်က ချဉ်းကပ်မေးမြန်းရာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အချို့က တုန့်ပြန်ကြသည်။
ကိုဝင်းကိုကိုလတ်အား Frontier သတင်းထောက်က ဆက်သွယ်ရာ အနော်မာသွားမည့်သူများတွင် ၎င်းမပါကြောင်း၊ မည်သူဦးဆောင်ကြောင်းလည်း မသိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲခန့်
သာကေတမြို့နယ်၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်၊ အနော်မာလမ်းမပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကမာရွတ်မှ ထွက်ခွာလာသော လူအုပ်စု ရောက်ရှိလာသည်။ “တောင်သာလေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်”ဟူသော စာတမ်းကတ်ထားသည့် နံပါတ်အဝါဖြင့် ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသည့် ဆရာတော်က ဦးဆောင်ကာ ကျန်သံဃာနှစ်ပါးနှင့် လူအုပ်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား ရပ်ကွက်တွင်းရှိ အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်းများအား ပိတ်ပေးရန် စတင်ဖိအားပေး ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါလူအုပ်စုတွင် ခန့်မှန်းခြေ စုစုပေါင်း သံဃာနှင့်လူ ၁၀၀ ဦးခန့် ပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
၎င်းတို့ အဓိကပြောဆိုသည်မှာ အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်းများသည် ဘာသာရေးသင်ကျောင်းများသာဖြစ်ပြီး ဝတ်ပြုခွင့် မရှိကြောင်း၊ ဝတ်ပြုနေသည်မှာ တရားမဝင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်ပိတ်ပေးရန် အမိန့် ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ၎င်းတွင် လုပ်ခွင့်မရှိကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်သည်မှာ ဥပဒေနှင့်မညီကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
လူအုပ်စုသည် တဖြည်းဖြည်းများလာပြီးနောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်း ပြန်လည် ခွန်းတုန့်ပြန်မရှင်းနိုင်တော့ဘဲ အထက်အဆင့်အား ဖုန်းဆက်တိုင်ကြားခဲ့သည်။
မွန်းလွဲ ၄ နာရီခန့်
မြို့နယ်မှူးနှင့် ရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာသည်။ ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။ မကြာမီ မြို့နယ်သံဃနာယက ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ဟုသိရသည့် ဆရာတော်တစ်ပါး ရောက်ရှိလာသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထဲသို့ သတင်းထောက်များမဝင်ရန် လူအုပ်က တားမြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သို့ညှိနှိုင်းကြသည်ကို မသိရတော့ပေ။
တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒုတိုင်းမှူး ရဲမှူးကြီးမျိုးဆွေလည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့သို့ ရောက်လာသည်။
သံဃာများနှင့် နောက်ထပ်လူများလည်း ကားများဖြင့် ထပ်ရောက်လာကြသည်။
အေပီသတင်းဌာနမှ ရုပ်သံသတင်းထောက် ကိုမင်းကြည်သိန်း ရောက်လာပြီး ရပ်ကွက်ရုံးရှေ့တွင် သတင်းမှတ်တမ်း ရိုက်ကူးနေစဉ် တစ်စုံတစ်ဦး ဖြေကြားပေးနိုင်မလားဟု အင်တာဗျူးခွင့် တောင်းသည်။ သတင်းထောက်တွေက မေးတော့တစ်မျိုး၊ လွှင့်တော့တမျိုး စသည်ဖြင့် လူအုပ်တွင်းမှ ပြောကြားကာ အခြားမာထန်သော စကားများလည်း ပြောလာကြသည်။ ကိုမင်းကြည်သိန်းက ထိုသို့မပြောရန် ပြန်လည်ပြောကြားသည်။ သံဃာတစ်ပါး ရောက်လာချိန်တွင် ကိုမင်းကြည်သိန်းက သူ့ကိုယ်သူ ‘ကျွန်တော်’ဟု သုံးနှုန်းပြောဆိုကာ သံဃာတော်ကို ‘တပည့်တော်’ဟု သုံးနှုန်း မပြောဆိုသဖြင့်ဟုဆိုကာ အော်ဟစ်ခံရသည်။ သူ့ကို တစ်ဦးက ထီးနှင့်ရိုက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက ခြေနှင့် ကန်သည်။ ဆွဲလားရမ်းလား ဖြစ်ပြီးနောက် ရဲက သတင်းထောက်များအား ရပ်ကွက်ရုံးနားမကပ်ရန်နှင့် အဝေးသွားနေရန် နှင်ထုတ်ပြီး မျဉ်းဝါကြိုးများ တားလိုက်တော့သည်။
ညနေ ၅ နာရီကျော်
အဝေးမှနေရသဖြင့် မည်သို့ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကို မသိရသော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအား လာရောက် ဖိအားပေးသည့်အဖွဲ့မှ လက်ရွေးစင်လူငါးဦးက ရဲများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူးအချို့နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ သာကေတမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်တို့ ခြံရံကာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများအား လိုက်လံသော့ခတ် ချိတ်ပိတ်ကြလေသည်။
ထိုသို့သော့ပိတ်သည်အား ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုမရိုက်ကူးစေရန် သတင်းထောက်များအား ရဲများက တားမြစ်ခဲ့ကြသည်။
ည ၇ နာရီကျော်တွင် ကျောင်းလေးကျောင်းလုံးအား ပိတ်ပင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်အား ယခုကဲ့သို့ သူ့ရှေ့မှောက်တွင် ပြုမူနေသည့်ကိစ္စအား သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာ မှတ်ချက်တစ်စုံတရာပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦးခန့်က မတရားကြောင်း ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်အား ဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်တိုင်ကြသည်။ သို့သော် တခဏကြာပြီးနောက် ငြိမ်သက်သွားကြသည်။
ရဲမှူးကြီးမျိုးဆွေက “ရဲက လုံခြုံရေးပဲ ယူပေးတာပါ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေကို အရေးယူဖို့ အုပ်ချုပ်ရေးက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်” ဟု သတင်းထောက်များကို ပြောကြားသည်။
ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း စုစုပေါင်း လေးကျောင်းကို သော့ခတ်ပိတ်ခဲ့သည်။ ပိတ်ခံရသည်မှာ အနော်မာ အရှေ့ ၄ လမ်း၊ အနောက် ၇ လမ်း၊ အနောက် ၁၁ လမ်းနှင့် အရှေ့ ၁၂ လမ်းတို့မှ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ အနောက် ၁၁ လမ်း စာသင်ကျောင်းမှ မော်လဝီ ကိုထွန်းထွန်းဝင်း၏ အဆိုအရ တစ်ကျောင်းလျှင် ကျောင်းသား ၂၅၀ ခန့် တက်ရောက်နေကြသဖြင့် ကျောင်းလေးကျောင်းတွင် စုစုပေါင်း ကျောင်းသား ၁,၀၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟုသိရသည်။ ကျောင်းလေးကျောင်းအနက် ၎င်း၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ကျောင်းတွင် တရားဝင် ဝတ်ပြုခွင့်ရှိကြောင်း၊ စာရွက် စာတမ်းများလည်းရှိကြောင်း၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ပုဇွန်တောင်မှ ဗလီတစ်လုံးအား ဖျက်ကာ နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးရသဖြင့် ထိုနေရာအား အစားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်အရ အဆိုပါစာသင်ကျောင်းများတွင် ဝတ်ပြုကြသည်မှာလည်း မှန်ကန်ကြောင်း သိရသည်။
အမည်မဖော်လိုသော မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးကလည်း “ကျွန်တော်တို့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတာကို လာဖျက်စီးကြတယ်ဗျာ။ အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ ဘာပြဿနာမှလည်း မဖြစ်ဘူးဘဲနဲ့ ဒီလိုလုပ်ကြတယ်။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ဝတ်ပြုတဲ့နေရာကို ဒီလိုလာပိတ်ရင် ဘယ်ရင်ထဲ ကောင်းမလဲ”ဟု Frontier ကိုပြောသည်။
ဒေသခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မွတ်ဆလင် ငါးဦးထက်မနည်းအား မေးမြန်းချက်အရ ယခုလူစုလူဝေးဖြင့် လာလုပ်သူများထဲတွင် ရပ်ကွက်ဒေသခံများ ပါဝင်သည်ကို မတွေ့ရကြောင်း သိရသည်။
အနော်မာရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် အမည်မဖော်လိုသည့် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်တစ်ဦးက “ကျွန်တ်ာတို့ အဲဒီလောက် မရိုင်းပါဘူးဗျာ။ ဒီမှာနေလာတာကြာလှပြီ ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဖူးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်(ဘောလုံး)ပွဲတွေရှိရင် ည ၁ နာရီ ၂ နာရီ ဒီလိုပဲ လျှောက်သွားနေတာ။ ဒီလို လုပ်တာတော့ မကောင်းဘူးဗျာ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
Frontier မှ ကူးယူ၍ ဖော်ပြပါသည်။
← တရားမဝင် ဗလီ … ရှေးဗမာမင်း၊ရခိုင်မင်းများဟာ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းဖို့ရာ ဗလီများတည်ဆောက်ခွင့် ပေးခဲ့ရုံသာမက သူတို့ကိုယ်တိုင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုလိုနီလက်အောက် ရောက်ခဲ့စဉ်မှာရော၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ လက်ထက်မှာပါ နိုင်ငံသားမွတ်စလင်များအတွက် ဗလီများ တည်ဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး သပ်လျှိုသွေးခွဲခဲ့စဉ်ကစလို့ ဗလီအသစ်ဆောက်ဖို့ကို မဆိုထားနှင့်၊ အဟောင်းကိုတောင် ပြု ပြင်ထိမ်းသိမ်းဖို့ အလွန်ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်
အာရဗီစာနှင့် အခြေခံ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းဆိုသည်မှာ →